Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Engineering, Machinery အလုပ်အကိုင်များ
အင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ Jobs in Myanmar
အင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ် 39 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို ဖြစ်ပြီး ၊Accountingနှင့်သက်ဆိုင်သော ဘွဲ့ (သို့)ဒီပလိုမာ တခုခုရှိရပါမည်။ 2.Odoo software (သို့)Accounting. software တခုခုကိုအသုံးပြုနိုငိရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Uniform ပေးမည်။ လစာညှိနိူင်း တပတ်တရက်နားရမည်။
ကားသေး/လတ်အောက်ပိုင်းဖြုတ်တပ်လုပ်နိုင်ရမည်။ ဂီယာဘောက်တင်ချလုပ်နိုင်ရမည်။ အင်ဂျင်ပိုင်းပလပ်၊အင်ဂျက်တာ၊လေတံခါး၊အေဆောဆင်ဆာအဖြုတ်တပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
Power one car service
- အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည် - OBD II scan အသုံးပြု၍အဖြေရှာတတ်ရမည် - မိမိဘာသာ ကားမောင်းစမ်း/ အဖြေရှာတတ်ရမည် - မိမိပြင်သောကားအား တာဝန်ယူနိုင်ရမည်
Leader Assistance (Servicing)
Tn Engineering & Aircon service
- သက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - teamwork စိတ်ရှိရမယ်။
မြေတိုင်း | Quantity Surveyor
- Auto Cad 2D(or)3D ထိရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ် ရမည်။ - M & E Estimateကျွမ်းကျင်စွာတွက်ချက်နိုင်ပြီးQC & QS စစ်ဆေးတွက်ချက်နိုင်ရမည်။ - အစိုးရတင်ဒါ, privateတင်ဒါ နှင့် တီကော်တင်ခြင်းများ လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
ကား ယာဉ် ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်သူ | Car, Vehicle, Body Repair
- အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည် -ကားမောင်းတတ်ရမည် - အပြောအဆိုပြေပြစ်၍ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိရမည် - မိမိတာဝန်ယူသောကားအား အစ/အဆုံး ဦးစီးနိုင်ရမည်
ကားအောက်ပိုင်း/ အင်ဂျင်ပိုင်း ကျွမ်းကျင်
Civil Engineer (Quantity Surveyors)
• ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ •ဘတ်ဂျက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ တင်ဒါများအတွက်ပစ္စည်းများကုန်ကျစရိတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ပမာဏစာရင်းများအပါအ၀င်တင်ဒါနှင့်စာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုသို့တင်ပြရမည်။ •အသုံးစရိတ်နှင့်ဘတ်ဂျက်ကိုစစ်ဆေးရမည်။ • သတ်မှတ်ရက်များအတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြည့်မီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ဖိအားများအောက်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။ • ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးခံစားခွင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်။ • အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း။ • စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ကို ညှိနှိုင်းခြင်း။ • သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ စာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းများအား ထိန်းသိမ်းခြင်း update လုပ်ခြင်း ။ (စာချုပ်များ၊ ကိုးကားချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ ပုံများ etc)။ • တောင်းဆိုလာသောအခါတွင် လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ နောက်ထပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ • ကုမ္ပဏီ HSE မူဝါဒနှင့်အညီလိုက်နာရမည်။
စက်ပြင်ဆရာ | Mechanic
Ko Win Maung Car Service Center
လက်ထောက်တစ်ယောက်တွင်ရှိသင့်သည့် အရည်ချင်းများနှင့်ပြည့်စုံရမည်။ Head Mechanic နှင့်အနီးကပ်အလုပ်လုပ်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ ဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်ရှိရမည်။ သင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ မိမိအလုပ်အပေါ်တန်ဖိုးထားရမည်။ စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ Customers များနှင့်လည်း အနီးကပ်ဆက်ဆံဖြေရှင်းရမည်။ အတွေ့အကြုံ ၊ ပညာ၊ လစာ စုံလင်အောင်ရဖို့ Ko Win Maung - Car Service Center နဲ့လက်တွဲလိုက်ပါ။ 🤝🤝
အကျိုးအမြတ်: ✔️နေစရာနေရာစီစဉ်ပေးပါမည်။ ✔️ထမင်းစရိတ်ပေးပါမည်။ ✔️ အရည်အချင်းတိုးတက်မှုပေါ်မူတည်၍ လစာတိုးမည်။
Junior Project Engineer (Mechnical)
Sales & Service Technician (Pathein Region)
-Safety ကို အလေးထား၍ M&E business ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန် ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ဆောင်ရမည်တို့ကို proposal များပြုလုပ်ရမည်။ -Cstomer များ၏ မျှော်မှန်းထားသော စိတ်ကြေနပ်မှုရစေရန် Parts နှင့် Sales ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ -Aftersale service team ဖြစ်သည့် infield နှင့်workshop activitiesများအပါအဝင် လိုအပ်သည့် ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ -Customerစိတ်ကြေနပ်မှုရရှိစေရန် တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်၍ သင့်လျော်သောအကြံပြချက်များ update အကြောင်းအရာများကိုManagement ထံပုံမှန်တင္ျပရမည္ -Preparation of operational and daily functions as required, activity striving to meet targets and tasks are finish intime. -Ensuring customer service performance by service personal is professional and appropriate to support business growth, brand differentiation, sales margin and customer loyalty. -Follow up daily service team schedule according to the Contract and on call basic. -Being aware of Safety and Environment working conditions inamechanical workshop and on the field9. Responsible to strengthen and develop the Power After-Sales business: maintenance, service contract, overhaul and Spare Parts Sales. -ACMV System Repairing, Mainenance & Servicing Mechanical (or) Electrical and M&E Related Business. -Must Drive car with Manual Transmission Gear. -Motivated with Can Do attitude, Willing to learn, Motivate to Others.
- သက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ ၄ နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - teamwork စိတ်ရှိရမယ်။
- နေ့စဥ်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်အတွက် အဓိကငွေကိုတိကျသေချာစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။ - Bank Transaction များအတွက် ငွေအဝင်အထွက်များကိုတာဝန်ယူရမည်။ - နေ့စဥ်ငွေလွှဲခြင်းအတွက် excel တွင် ဒေတာထည့်သွင်းပြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ်သို့ upload လုပ်ရမည်။ - ဆိုက်ကုန်ကျစရိတ်ကို ဘောက်ချာ၊ excel အကျဉ်းချုပ်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ဖြင့် စစ်ဆေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ - Responsible for follow up outstanding advance payment to staffs. - Payment voucher filing on monthly basis. - Responsible to classify the project expenses by work pack no. - Responsible to dealing with project team for payable and receivable. - Responsible for document preparation and submission process to related office if require. - Any other duties assigned by Sr. staffs.
အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် သင်ချင်စိတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည် မြန်မာစာ ေရးတတ် ဖတ်တတ်ရမည်
• မီးချောင်းများ၊ ခလုတ်ခုံများ၊ အရေးပေါ်မီး၊ မီးအချက်ပေးကိရိယာများ၊ heat detector များ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း။ • Electrical panel များ၊ မော်တာများနှင့် ဓာတ်အားပေးစနစ်များ၊ မီးသတ်စနစ်၊ utility စနစ်များအားလုံးကို အခြေခံပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း။ •လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပြဿနာများရှာဖွေခြင်းနှင့် DBs များ၊ မော်တာများ၊ မီးစက်များ၊ အလင်းရောင်၊ အပူပေးစက်များနှင့်အခြားအရာများကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ခြင်း။ • Plumbing and Sanitary Works, Pumps and Pumps Control System • လျှပ်စစ်၊ ရေပိုက်နှင့် သန့်ရှင်းရေးအတွက် တွက်ချက်ခြင်းနှင့် စီစဉ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတရှိရမည်။ • ရေသန့်စင်မှုစနစ်ဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတ ရှိရမည်။ • ဖိအားများအောက်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။ •အနိမ့်ဆုံးကြီးကြပ်မှုနှင့်တင်းကျပ်သောအချိန်ဇယားဖြင့်အမှီအခိုကင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း။ •ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ • အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် လိုအပ်သော PPE ဝတ်ဆင်ရမည်။ • စီမံခန့်ခွဲမှုမှ တောင်းဆိုလာသောအခါတွင် လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍနှင့် ထပ်လောင်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
M& E Maintenance Assistant Technician
- အသင်းအဖွဲ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ပြီးလူမှု ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရပါမည်။ - လိုအပ်ပါက အချိန် ပို ဆင်းနိုင် ရမည်။
- အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - ခေါင်းဆောင်ညွှန်ကြားချက်ကိုနာခံရမည်။ - teamwork စိတ်ရှိရမယ်။
-ပတ်တီးကျွမ်းကျင်စွာ ရိုက်တတ်ရမည် -ကော်ပါတ်စား ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်ရမည် -ရေဆေး ဆီဆေး မျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ခြင်း ကျွမ်းကျင်ရမည် -ကိုနံရံနှင့် ကြမ်းခင်းအတွက် ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်ဆင်နိုင်ရမည် -ဗီနိုင်း ကြမ်းခင်း ကော်ကပ် တပ်ဆင်ခြင်း / ပေကြိုး ပေဘူး တိုင်းထွားခြင်းများ ကျွမ်းကျင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: လုပ်ရည်ကိုင်ရည် နှင့် ကြိုးစားသလောက် အခွင့်အလမ်းရှိမည်
• စက်ရုံနှင့် ပရောဂျက်များအသုံးပြုမှုအတွက် ဘဏ္ဍရေးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြခြင်း၊ • Administration I ရုံးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ • ရုံး/စက်ရုံမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။ • အမှာစာ၏ စာရွက်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ရမည် • လိုအပ်ပါက အခွန်နှင့် ငွေတောင်းခံမှုများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရမည် • ဝန်ထမ်းတက်ရောက်သူစာရင်းကို နေ့စဉ်/လစဉ်ဖြည့်သွင်းခြင်း။ • လိုအပ်ပါက ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် ပံ့ပိုးကူညီရမည် • ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းထားရှိခြင်းနှင့် စက်ရုံအတွက်နေ့စဥ်အသုံးပြုမှုများအတွက် အပတ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း။ • ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲပြီး စက်ရုံနှင့်အညီ မူဝါဒများကို ချိန်ညှိရမည် • အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ OH&S လိုအပ်ချက်များကို RJE မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည် • ထိရောက်သောစာရွက်စာတမ်းနှင့် ဖြည့်စွက်စနစ်တစ်ခုကို တီထွင်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် • ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒ၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ရလဒ်များ၊ ပရောဂျက်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းတည်နေရာ စသည်ဖြင့် ကန့်သတ်မထားသော ပို့စ်များပါရှိသော ဘေးကင်းရေးဘုတ်များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည် • အလုပ်ရုံ အိမ်သန့်ရှင်းရေးကို အဆင့်အတန်းမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရမည် • Factory Managers မှ တာဝန်ပေးသည့်အတိုင်း အခြားလိုအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ • မတူညီသော ဆက်ဆံရေးကောင်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: - ကြိုးစားမှု ပေါ်မူတည်၍ အခွင့်အလမ်းရှိမည်